shariif xasan sheekh aadan oo shalay gaaray magaalada marka kana hadlay xaalada magaaladaasi – STAR FM SOMALIA
shariif xasan sheekh aadan oo shalay gaaray magaalada marka kana hadlay xaalada magaaladaasi
Madaxweynaha Maamulka Koonfur Galbeed Shariif Xasan Sheekh Aadan oo shalay safar ku tagay Magaalada Marka ee xarunta Gobolka Shabeellaha hoose, ayaa sheegay ciidamo badan oo ka qayb qaata suggida ammaanka Magaalada Marka in la geynaayo Magaaladaasi.
Ammaanka Magaalada Marka ayaa ah mid aanan wanaagsaneyn, waxaana taasi cadeyn u ah dilal kala duwan oo Magaalada ka dhaca iyo qaraxyo lala eegto ciidamada Amisom oo ugu dambeeyay qarax shalay lagu tuuray ciidamo ka tirsan Dowladda oo Magaalada Marka ku sugnaa.
Madaxweynaha Maamulka Koonfur Galbeed Shariif Xasan, ayaa sheegay ciidamo ammaanka Magaalada sugga in la geynaayo Magaaladaasi, sidoo kalena la dhameystiraayo Maamulka Magaalada Marka si Bulshada ay u helaan adeegyda ay doonayaan.
Shariif Xasan ayaa tilmaamay in uu ka xun yahay dhibaatada shacabka kasoo gaartay falal ay Amisom ka geysteen magaalada Marka, waxaana uu tilmaamay in wixii dhacay laga wada hadlayo.
“Isbedal Amni oo degdeg ah ayaa ka dhici doona magaalada Marka, waxaan ka xunnahay wixii shacabka horay usoo gaaray, laakiinse maamulka Marka ayaa la dhameystiri doonaa, sidoo kalena magaalada oo dhan waxaan keenni donnaa ciidamo amniga suga.” Ayuu yiri Shariif Xasan.
Madaxweynaha Koonfur Galbeed, ayaa shacabka Marka u sheegay inaysan ka cabsan Shabaab oo ay la shaqeeyaan Maamulka cusub ee Magaalada Marka.
“Shabaab yaanan laga cabsan Ilaah ayaa wax dila , shabaab waa Dhiman Adduunka dambi ka soo galay maaha marka inay nagu soo Dhuumaaleystaan annagana aan garabsiinno aan iska Celino innaga oo iskaashanayna Shabaab.” Ayuu yiri Madaxweynaha Koonfur galbeed Shariif Xasan Sheekh aadan.
Naafada Ciidamadii Xooga Dalaka Oo Kacabnaaya Saraakiil Katirsan Ciidamada Dawlada Soomaaliya
Waxaa Lagu Wadaa in Uu Gaaro Magaalada Kismaayo Ra’iisul Wasaaraha Somalia Cumar C/rashiid Cali Sharmaake
Hadal-qoraal oo ka soo baxay Bangiga Addunka ayaa lagu ansixiyey lacag wadarteedu dhan tahay 100 million oo Dollar oo lagu taageeraayo sidii loo hagaajin lahaa Adeegyada Daryeelka Caafimaadka ee Somalia.
Mashruuca lagu hagaajinayo Adeegyadaasi waxaa lagu maalgelinayaa 75 million oo ay ballanqaday Hay’adda Kaalmaynta Horumarinta ee IDA, halka ay 25 million oo Dollar ka imaan doonto Xarunta Maalgelinta Caalamiga ee Haweenka, Carruurta iyo Dhallinyarada ee GFF.
Dhinaca kale, Madax-Gobaleedka Bangiga Adduunka u joogta Somalia, Kristina Svensson oo Qoraal soo saartay ayey ku sheegtay in Mashruucaasi sare u qaadi doono Adeegyada Caafimaadka, Nafaqaynta iyo hagaajinta Adeeyada Caafimaadka iyo Tayayntooda ee inta badan Deegaanadda ay Baahida ka jirto, oo ay ku jiraan Goballadda Bay, Bakool, Hiiraan iyo Sh/Dhexe.
Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Juballand Axmed Maxamed Islaam, ayaa Aqalka Madaxtooyada ee Magaalada Kismaayo ku qaabilay xubnaha guddiga xalinta khilaafadka Doorashooyinka ee heer Federaal.
Madaxweynaha ayaa Guddiga ku bogaadiyay dadalkooda ku aadan sidii dalka uga dhici laheyd doorasho xor iyo xalaal ah iyo sidii ay u xalin lahaayeen tabashada kasoo noqota doorashooyinka.
Xubnaha guddiga xalinta khilaafadka Doorashooyinka ee heer Federaal ayaa dhankooda ku amaanay Madaxweynaha Jubbaland sidii wanaagsaneyd ee uu u bilaabay doorashada qaar kamid ah Xildhibaannada Aqalka Sare oo degaan doorashadoodu tahay Jubbaland, iyaga oo ka codsaday in inta kale ee hartay la qabto.
Xubnaha guddiga xalinta khilaafadka Doorashooyinka ee heer Federaal oo badankood ku sugan Magaalada Kismaayo ee Gobolka Jubbada Hosoe ayaa saacadaha soo socda waxaa ay tegi doonaan magalada Baydhabo su ay goobjoog uga noqdaan doorashada qaar kamid ah Xildhibaannada Aqalka Sare oo Beri ka bilabaneysa Magalada Baydhabo.
Duqeynta ayaa waxaa la sheegay in Maanta ay ka dhacday aagga u dhexeeeya Qaycad iyo Hareeri Dheere ee katirsan Gobolka Mudug, halkaas oo ay ku sugan yihiin Xubno ka tirsan Ururka Al-Shabaab.
War kasoo baxay Wasaaradda Amniga Galmudug ayaa waxaa lagu sheegay in degaanka la duqeeyay oo ay Al-Shabaab ku sugnaayeen ay sidoo kale galeen Ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa Galmudug oo howlgal kujira.
“Dagaal iyo duqayn dhanka cirka ayaa ka dhacay saldhig kale oo kooxda Shabaab ay ku lahaayeen aagga u dhexeeeya Qaycad iyo Hareere Dheere, ayadoo ciidamada qaranka iyo kuwa Galmudug ay hadda galeen saldhigga la duqeeyey, Duqaynta saakay ayaa noqonaysa tii saddexaad oo deegaanada koofurta Mudug ka dhacda saddexdii todobaad ee la soo dhaafay, ayadoo Shabaab ay soo waajahday xaalad adag iyo dagaal qaraar ayaa lagu yiri” Warka kasoo baxay Wasaaradda Amniga Galmudug.
Ilaa laba Gantal ayaa la sheegay in diyaarad dagaal ay ku duqeysay deganka duleedka ka xiga degaanka Qaycad ee katirsan Gobolka Mudug, halkaas oo sidoo kale meel u dhow ay howlgallo ka wadaan Ciidamo ka tirsan kuwa dowladda Soomaaliya iyo kuwa Daraawiishta Galmudug.
Tiro laba jeer ah ayaa duqeyn dhinaca cirka ah waxaa lala beegsaday degaanka ku yaal duleedka degaanka Qaycad ee Gobolka Mudug, waxaana Mareykanka oo sheegtay duqeyntaas uu sheegay inay aheyd mid lagu taageerayay Ciidamada dowladda ee aagaas howlgallada ka wada.